Ababu Namwamba oo sheegay in uu la shaqeyn karo Jubilee – The Voice of Northeastern Kenya
Ababu Namwamba oo sheegay in uu la shaqeyn karo Jubilee
Xildhibaanka degmada Budalangi Ababu Namwamba ayaa ku dhawaaqay in tallaabada 3-aad ee uu qaadayo ay qeyb ka tahay la shaqeynta isbahaysi kasta oo siyaasadeed oo xitaa uu ku jiro isbahaysiga hogaanka u haya dalka ee Jubilee.
Mr Namwamba oo ahaa xubin aad u fir fircoon oo ka tirsanaa isbahaysiga CPRD isla markaana hayay xilka xog hayaha guud ee xisbiga ODM ayaa goor sii horeysay shaaciyay in uu iska casilay jagadaas.
Isagoo ka hadlayay kulan uu la yeeshay hogaamiyeyaal kasoo kala jeeda degmooyinka Waqooyiga iyo Koonfurta Teso ayuu Namwamba ka dhawaajiyay inuu diyaar u yahay in uu la shaqaeeyo xisbiyada niyadda wanaagsan marka la gaaro doorashada madaxtinimada ee sanadka soo socda.
Waxa uu xildhibaankan hoosta ka xariiqay in isaga iyo kooxdiisa aysan hadda heynin musharax ay u doonayaan tartanka xilka madaxweynaha, balse ay qorsheynayaan in ay taageeraan isbahaysi gaar ah.
Ababu Namwamba ayaa dhinaca kale soo hadal qaaday arrimo ku saabsan hogaamiyaha isbahaysiga CORD Raila Odinga, isagoo sheegay in Mr Odinga uu ka naxsanyahay saameynta uu Namwamba ku leeyahay gobolka Galbeedka dalka.
← Shacabka oo looga digay in ay kireystaan gawaarida Schoollada
Wada hadalladii nabadeed ee Yemen oo bur buray →